Ngwá Ọrụ Na-aga n'ihu Ngwaike, Stamping Metal Die, Ngwá Ọrụ Ime ụlọ - LangO Mold
Ụlọ ọrụ Uru
Kunshan JS Mold bụ onye na-emepụta ihe ntụtụ rọba dị elu nke na-abụkarị ọkachamara n'ịkpụzi ihe na ịkpụzi & ịgbakọta nkeji. Anyị ọkachamara na nkenke mmebe na emeputa maka 15 afọ, na ahụmahụ imewe otu na ọkachamara engineering otu, na ezi àgwà na mara mma asọmpi price.
Dị ka ihe ISO9001: 2015 gbaara ụlọ ọrụ, Kunshan JS Mold nwere usoro nke integrated ebu imewe, mmepụta, na ule ọkọlọtọ, nke kwesịrị ekwesị maka Japan, USA, Europe na mba ndị ọzọ 'chọrọ, ọ bụ anyị ozi na-anapụta ndị kasị mma ebu na kpụrụ akpụ. akụkụ dị na ahịa site na usoro nchịkwa siri ike.
Ihe ngwọta rọba zuru ezu otu nkwụsị: Nhazi & mmepe, Ngwá ọrụ Ngwá Ọrụ, Injinịa, Ịkpụzi Injection, Mgbakọ & Nkwakọ ngwaahịa. Ndị ọkachamara anyị na ndị na-anabata ndị na-edozi nsogbu na-adịru mgbe ebighị ebi ga-egbo mkpa gị oge niile, nke a ga-abụ akụkụ dị egwu nke usoro ọrụ anyị.
LangO bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ n'ụdị ngwá ọrụ ígwè na akụkụ stamping metal, ngwaahịa anyị na-etinye aka na n'ichepụta ngwá ọrụ ígwè ma na-emepụta akụkụ stamping metal.